Akụkọ ụwa – Page 29 – hoo!haa!!
Akụkọ ụwa (Page 29)
ARỤ! Mmọnwụ na-aṅụ Hero! Nkea mere eme na ngwụcha izu ụka gara aga. Ụmụ okorobịa na-eti mmọnwụ bịaruru ebe ndị mmadụ gbakọrọ, gbaa egwu, gbaa egwu, wụgharịa etu o siri kwesị. Ka o mechara, ụmụ nwoke nọ ebe ahụ aṅụ mmanya gwara ya na ego adịghị kama ọ chọọ mmanya,Read More →
INDIA: Flavour “N’abanịa” e mekwaala ka ọ si eme. Ozi ruru hoo!haa!! aka na-ekwu na Flavour akpọrọla “nwa ya nwoke” bụ Semah Weifur, nwa Liberia so ya agụ egwu kpụrụ isi gaa New Delhi, India Maka ịwa ya anya iji mee ka ọ hụwa ụzọ. Nwatakịrị nwoke a bụ SemahRead More →
Enugwu: Ngosipụta Nka “Word4Word Art Project” na-aga n’ihu ugbua n’Enugwu n’ogige National Gallery of Arts, Enugwu. Site na nkọwa Mazi Ikenna Nwachukwu bụ onyeisi otu Word4Word Art Project, ngosipụta nka a ga na-abụ kwa ọnwa atọ. Ikenna Nwachukwu, onyeisi Word4Word Isiokwu ngosipụta nka nkea bụ “Omenala Ọchịchịrị” nke na-arụtụ akaRead More →
Abụja: Ozi na-erute anyị ntị ugbua gosiri na Onye ndu otu ndọrọndọrọ ọchịchị APC bụ Sinetọ Bola Tinubu e nweela nsogbu. Etu ihe si kwụrụ ugbua, APC tiwazịrị ụzọ abụọ maka ndọrọndọrọ ndị ga-anọ n’isi na ngalaba Omebeiwu nke Gọọmenti Naijiria. Tupu ugbua, Tinubu bubu n’obi ime ka o siRead More →
Legọs: Na Legos, ndị uwe ojii ejidela Oriaku Patience Odowo, onye e nwetere ozu nwa onye agbata obi ya bụ Treasure Akinsohun, onye nke dị afọ isii n’ime igbe njuoyi (freezer) dị na be ya bụ nke e ji ere mmiri oyi na mmanya. DSP Bala Elkana, ọnụ na-ekwuru ndịRead More →
Nsukka: Aka ndi uwe ojii nọ na Nsụka akparala okongwu arụrụala dinara nwatakịrị dị afọ iri. Mazị Ịmanụel Ugwu bụ onye laworo ezumike nká n’ọrụ bekee jiri ụzọ aghụghọ rabata nwatakịrị ahụ bụ Chisom Odo n’ime ụlọ site na ịdị ye gaa zụtara ya ihe. Okongwu arụrụala a, onye rụburuRead More →
Messi, aṅachaala ka ákwà! Ihe bụ akụkọ abụghị na Otu egwu bọl Liverpool nke Ingland jiri ọkpụ anọ asaghị asa were sụọ ndi otu egwu bọl Barcelona akwụ. Ihe na-ewu ị bụ na Lionel Messi, odogwu riri amosu n’egwu bọl aṅachaala ka ákwà. Ndị nkea kacha afụ ụfụ n’obi bụRead More →
Kano: Ọchịagha Hisbah na Kano Steeti, Nabahani Usman,ekwuola sa site taa bụ Mọnde bụ ụbọchị oge ebumọnụ ndị Alakụba na-amalite na ha ga-amalite ijide okenye ọbụla ha nwetara na-eri ihe n’iro. Hisbah bụ otu ọrụ nchekwa Sharia. O kwuru na sọọsọ ihe ga-eme ka ha hapụ ndị e jidere bụRead More →
Nyenụ anyị ikike ruuru anyị – ndị akwụla
Na Legọs, ndị akwụla so ndị ọrụ ndị ọzọ were mee ịkwụ n’ahịrị n’ahịrị iji merube Ụbọchị ndị ọrụ ụnyaahụ. Ha jiri ohere ahụ were kọwaa uru ha bara, ha mekwara ka o doo anya na e kwesịghị ịgụpụ n ‘ihe ọbụla a na-eme n’ obodo. Ka ha na –Read More →
IGBO GA-ABỤ ONYEISALA 2023-OBIOHA
Enugwu: A nọrọ taa n’ụlọ ezumezu dị na Toprank hotel, E ugwu were hiwe otu South East for President 2023 bụ otu na-agba mbọ ka ọchịchị Naịjirịa rute Ndigbo aka n’afọ 2023. N’ozi nnabata ya, onye nlekọta otu a bụ Ụkọchukwu Oké Chukwu Obiọha kwuru na oge eruola mgbe onyeRead More →
DEEDE ARỤRỤALA ECHEELA NWA NWANNE YA NCHA
Legọsị: Otu nwata nwoke afọ tara mmiri anọrọla na Legọsị chee nwatakịrị oku n’aka bụ nwa nwanne ya nwoke ncha mmiri mmiri e ji asa efere bụ Sunlight. Nwoke ahụ aha ya bụ Ifeanyị Udeoye onye gbara afọ iri atọ n’otu ma bụrụkwa onye Ihiala dị n’Anambara Steeti kọwara naRead More →
“UNU EBICHARAZỊLA ANYỊ” ỤMỤNWANYỊ NA-AGWA NDI AHỊA
Legọsị: Ndi ahịa ụmụ nwoke ka ụmụ nwanyị na-abịa ahịa Yaba dị na Legọsị dọrọ aka na ntị ka ha kwụsị ibichara ha aka n’ahụ ma ha bịa ahịa ahụ. Nwaada Medlyne Reuben bụ nwata akwụkwọ na mahadum UNILAG kwara arịrị banyere ajọ ọnọdụ nke ọ sị na ndi ọkachaRead More →
NWOKE ỊTALI EGBUOLA AKWỤLA NWANYỊ NAỊJIRIYA NA ONYEJUGHI YA AFỌ
Rome: Aka akparala otu nwoke onye Ịtali dị afọ iri anọ n’otu bụ Leopoldo Scalici maka igbu akwụla nwa Naịjiriya bụ Benedicta ma tunye ozu ya n’olulu. Ozi hoo!haa!!nwetara bụ na nkea mere n’obodo Modena Nord ebe Mazị Scalici kpọtara ya bụ akwụla ka ha nọrịa. Mana esemokwu dapụtaraRead More →
AKA AKPARALA ỌGBA AKA EWE EGO NA ATM
IBADAN –Otu nwokọrọbịa bụ Azeez Morufu ka aka nọrọ ụnyahụ na Dugbe dị n’Ibadan kpara ka ọ na-ewere ego n’igwe ATM n’ejighi kaadị ATM ọbụla. Ọ bụzị onye na-agafe hụrụ ihe ịtụnanya a were tie mkpu mere ka ndi nche ụlọakụ ahụ dị n’akụkụ ụlọọrụ Redio Naịjiriya, Ibadan were jidezie ya.Read More →
ADELEKE:ỤLỌIKPE BỤZỊ NGWA ỌRỤ ASO ROCK-IPOB
Otu Indigenous People of Biafra, IPOB, ebowo ndi ọkaikpe Naịjiriya ebubo ịbụzị ngwa ọrụ ndi “isi aba okpu” nọ n’Aso Rock karịa ịbụ ọnụ na-ekwuru ndi ọnụ erughi n’okwu. Otu a mekwara ka ndi Naịjiriya mata na ndi ọkaikpe bụ sọọsọ onwe ha ka ha ma. Ka ọ na-etinyeRead More →
EU ekpebiela ịkwụ Afrịka ụgwọ ndokwa
ỤLỌ NZỤKỌ OMEBEIWU YUROP akwadoola n’uju mkpebi na-aga akwụ mba Afrịka ụgwọ ndokwa maka arụ nile ndi ọcha kpasara ndi isi ojii oge Yurop chịrị Afrịka. Iwu ọhụrụ ahụ chọrọ ka mba dịgasị na Yurop weta usoro mgbanwe iji belata mmegide a na-emegide nde pụrụ nde ndi isi ojii bụRead More →
ASỤSỤ IGBO AGAGHỊ ANWỤ N’ANỊỌMA-OKỌWA
ASABA: Aka na-achị Delta Steeti bụ Dọkịnta Ifeanyi Okọwa ekweela ndi nkuzi na ndi ntorọbịa Anịọma nkwa na ọchịchị ya ga ewepụ nkuzi olumba ndi Anịọma ọbụla n’ụlọ akwụkwọ dịgasị na steeti ahụ. Ifeanyi Okowa toro ha maka mbọ pụrụ iche ha gbara maka ịdịnotu ndi Anịọma. Ọ kọwara naRead More →
Zimbabwe— Nwanyị gbara iri afọ anọ n’ise ka nwanne ya nwoke gburu ilu maka ịnabata ndi ụka Ama Jihova bịara okwu Chukwu n’ụlọ ha dị n’obodo Pangola. Serina Makasi, ka nwanne ya obere dị iri afọ atọ n’ise bụ Tawanda Manyori kụnyere ikputu ọnụ ma bokwaa ndi ụka ahụ ebuboRead More →
Abakiliki: Dọkịnta Ogbonnaya Ọnụ bụ aka chịburu Abịa Steeti ka anyị nụrụ na o nwere nnukwu ihe mberede okporo ụzọ ụnyahụ n’Abakiliki. hoo!haa!! nụrụ na ya bụ ọdachi dapụtara ka ọ nọ njem achụmnta nkwado maka Onyeisiala bụ Muhamadu Buhari. Aka na-achị Ebọnyị Steeti, Injinịa Dave Ụmahị gakwara leta yaRead More →